सम्झनामा एउटा प्रेम | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
सम्झनामा एउटा प्रेम
Posted on फ्रेवुअरी 28, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	एक्सन हिरोको छविमा उभिँदै आएका निखिल उप्रेतीलाई ‘सेन्टिमेन्टल’ भूमिकामा हेर्ने हो भने राजधानीका विभिन्न हलहरूमा चलिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘सम्झना’ उपयुक्त हुन सक्छ । उनी यति भावनात्मक भूमिकामा छन् कि मनको कुरा खोल्नै सक्दैनन् । यही स्वभावका कारण उनको प्रेम असफल हुन्छ र उनी फगत कसैको सम्झनामा बाँच्ने एउटा अमर को पात्र बनिरहन्छन् ।
नेपाली मसला फिल्म मन पराउने दर्शकहरूलाई फिल्म हेरेपछि लाग्नेछ, ‘प्रेमले प्राप्तिमात्रै होइन, त्याग पनि खोज्दो रहेछ ।’ योसँगै प्रेमको अर्को पनि ‘कि प्वाइन्ट’ महसुस गर्नेछन्, ‘संकुचित या अन्तर्मुखी स्वभाव बोकेका व्यक्तिका प्रेम सफल नहुन पनि सक्छ ।’
गाउँमा चुलबुले श्यामा (सञ्चिता लुइँटेल) हुर्किंदैछिन् । प्रेम गरेरभन्दा पनि कहिल्यै नदेखिएको अपरिचितको पछि लागेर पराइघर जानुपर्ने ग्रामीण नेपाली युवतीको मनोदशा उनमा पनि हुन्छ । उनी भावी जीवनसाथीको कल्पनामा डुब्छिन् । गाउँकै अर्जुन -निखिल) उनलाई मन पराइरहेको त हुन्छ तर भन्न सक्तिनन् । यही ‘भन्न नसक्नु’ले नै दुवैको जिन्दगीलाई भत्काइदिन्छ र बीचमा कसैले फाइदा उठाउँछ ।
गाडी दुर्घटनाबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि ग्रामीण वैद्य -श्यामाका बुबा) कहाँ ल्याइएको युवक राहुल फाइदा उठाउने पात्रको रूपमा देखिन्छन्, नियतवशभन्दा पनि उनी संयोगले श्यामाको प्रेममा फस्छन् । दुर्घटनाले मस्तिष्कमा परेको आघातका कारण सबै विगत बिर्सिरहेका उनी होस खुलेर जब आफ्नो प्रेमिका सम्झेर गाउँ छाड्छन्, त्यतिन्जेल श्यामा गर्भवती भइसकेका हुन्छिन् ।
अन्तरमुखी मान्छेहरू जस्तोसुकै हालतमा पनि आफ्नी प्रेमिकालाई ग्रहण गर्छन् भन्ने फिल्मको अर्को सन्देश हो । गर्भ बोकेकै कारण श्यामा अब गाउँबाट लखेटिन्छिन्, तर अर्जुन
-निखिल) ले उनको साथ छोडदैनन् । आफूले भित्रभित्रै मन पराए पनि भन्न नसकेको निखिल श्यामाकै प्रेमीको खोजी गर्न सहर आउँछन् । सहरमा सबै घटनाहरूको पर्दाफास हुन्छ । श्यामाले अर्जुनको प्रेम पत्तो पाउँछिन्, त्यतिन्जेल अर्जुनको मुत्यु भइसकेको हुन्छ । प्रेम अब सम्झनामा मात्रै ।
फिल्मको मुख्य चुरो सेन्टिमेन्टल (भावनात्मक) प्रेम कथा नै हो । सबै पात्र प्रेमका सन्दर्भसँग जोडिएर आउँछन् । यसलाई बल दिन गीत/नृत्य र द्वन्द्वका मसलाहरू राखिएका छन् । गीतले प्रेमलाई थप गाडा र भावनात्मक बनाउन बल दिन्छ, द्वन्द्व (फाइट) ले कथालाई गति र दर्शकलाइ तताउन । प्रेमको मूल कथानकलाई परम्परागत मसला शैलीमा दौडाएको फिल्ममा अन्तर्मुखी अर्जुन आफ्नी प्रेमिकाले बोकेको अरूकै गर्भ पनि स्वीकार्न तयार हुन्छन् ।
‘प्रेम प्राप्ति मात्र होइन, त्याग पनि हो,’ भन्ने सन्दर्भलाई पुष्टि गर्ने पात्रको रूपमा अर्जुन नै छन् । उनी प्रेममा असफल हुन्छन् । तर, जब उनको मृत्यु हुन्छ, श्यामाले अरूकै भ्रुण भए पनि अर्जुनकै नाम राख्छिन् र एकल जिन्दगी गुजार्छिन् । अबको दुनियाँमा सम्भव नभए पनि यसलाई अमर प्रेमको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ, जुन समाजमा विरलै देखिन्छ ।
प्रेम गर्ने प्रवृत्ति र शैलीको हिसाबले फिल्ममा दुई पात्र समानान्तर रूपमा उभिएका छन् । गाउँले र सोझो प्रेम गर्ने युवक अर्जुन अनि सहरी युवक राहुल । राहुल गाउँकी सोझी युवतीलाई गर्भ बोकाएर सहर फर्किन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि फिल्ममा राहुल सकारात्मक पात्रको रूपमा छन् । श्यामासँगको प्रेम मस्तिष्क आघात भएको बेहोसीको बेला भएको देखाएर उनलाई चोख्याउन खोजिएको छ । यौन भोक मेटाउन मात्रै प्रेमको बहाना गर्ने नयाँ पुस्ते र सहरी शैलीको प्रेम प्रवृत्ति बोकेको पात्रको रूपमा उनको चित्रण गरिएको भए फिल्मको वजन केही बढ्थ्यो र प्रेम गर्ने नयाँ पुस्ते चरित्र बाहिर आउन सक्थ्यो ।
सबै कुरा अभिनयबाट भन्दा पनि संवादले प्रस्ट्याउन खोज्ने नेपाली फिल्मको कमजोरी ‘सम्झना’ मा पनि दोहिरिएको छ । बाल चरित्र सोफिया श्रेष्ठको संवाद उमेर सुहाउँदो छैन । अर्जुनलाई उत्साह बढाउने क्रममा एउटा समलिंगी पात्रले ‘नामर्द लौ चुरा लाऊ..’ भन्ने संवाद बोल्छन्, जसले हिन्दू नारीको मनोबल घटाउने काम गर्न सक्छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ, ‘चुरा लगाउने महिलाहरू असक्षम र दुर्बल हुन्छन् ।’ प्रज्ञा फिल्मस्का लागि प्रज्ञा जोशीद्वारा निर्मित फिल्मको अर्को पक्ष हो, तेस्रो लिंगी संवेदना । च्यानल नेपालमा केही अघि प्रसारित ‘सरी ल’ सिरियलमा तेस्रो लिंगी पात्रको
रूपमा देखिएको विल्सन विक्रम राईले यसको नेतृत्व गरेको छ । उनले समलिंगीको रूपमा साँच्चिकै अभिनय गरेका छन् । तर, समलिंगीलाई हरपलको साथी बनाउने अर्जुन (निखिल) चाहिँ कुन लिंगी ? अथवा यही कारणले उनी अन्तरमुखी बनेका हुन् ? फिल्म यो विषयमा चुप छ ।
फिल्मका गीत र संगीत पक्ष राम्रै छ । राजेन्द्र थापाका शब्दहरू मर्मस्पर्सी र अर्थपूर्ण छन् भने महेश खडकाको संगीत मन छुने । सूर्यदेवको द्वन्द्वमा नयाँ प्रयोग खासै छैन । प्रदीप भारद्वाजको कथा, शान्त नेपालीको नृत्य र भीम रानाको छायांकन रहेको फिल्ममा निखिल र सञ्चिताको अभिनय ठीकै छ भने राजवल्लभ कोइराला र गरिमा पन्तलाई केही खुलाउन सकिन्थ्यो । निखिल केही सेन्टिमेन्टल दृश्यमा हँसिलो देखिन्छन्, उनको अभिनयलाई पनि थप तिखार्न सकिन्थ्यो । शुक्रबार विश्वज्योति, अष्टनारायण, गोपीकृष्ण, गुण, वाराही, गंगालगायतका १७ हलमा एकैपटक रिलिज गरिएको ‘सम्झना’ ले मसला फिल्म रुचाउने दर्शकको ध्यान भने पक्कै तान्नेछ ।
Filed under: समचार « होलीका क्रममा २ सय ९३ पक्राउ ओली चढ्ने गाडी कर्मचारीले ओलीलाई नदिन चेतावनी »